Imeltblown Non Nokwelukiweyo Indwangu Abakhiqizi & Abahlinzeki | URayson
Raysonon nonlun fabric umenzi kanye nomhlinzeki eChina.
Kk Spunbond Non Nokwelukiweyo Indwangu
Indwangu Engafani Nokwelukiweyo
Medical Non Nokwelukiweyo Indwangu
Indwangu engeyona Nokwelukiweyo Yezolimo
Uboya Bokuvikela Isithwathwa
Non Nokwelukiweyo Weed Control Indwangu
Indwangu Yetafula Engenalukiwe
Sms Non Nokwelukiweyo Indwangu
Indwangu Ye-Meltblown Non Nokwelukiweyo
Needle Punch Non Nokwelukiweyo Indwangu
Spunlace Non Nokwelukiweyo Indwangu
Indwangu ye-Meltblown engeyona eyelukiweyo Yenziwe ngenqubo ekhethekile yokukhiqiza indwangu engalukiwe enemicu emihle kakhulu. Indwangu engavukiwe encibilikile iyinto ebalulekile yokwenza izifihla-buso zobuso ezivikela abasebenzi bezokwelapha kwi-coronavirus entsha. Le ndwangu yesihlungi esincibilikile iyingxenye esemqoka yokuphefumula enganikeza iningi lokuvikelwa. Ingasetshenziswa kabanzi endaweni yokuphefumula elahlwayo, imaski yokuhlinzwa, imaski yobuso, imishini yokuphefumula esetshenziswe kabusha, kanye nokuphefumula okuhlinzwa. Njengoba igciwane lisakazeka emhlabeni wonke, lezo zimaski zobuso ziyashoda.
I-meleltball non woven indwangu 25gr yamaskandi
Yini encibilikisiwe yendwangu eyenziwe ngayo?Indwangu e-meltbablown engalukiwe yenziwa ngenqubo ekhethekile yokukhiqiza indwangu enolukiwe enemicu emihle kakhulu. Indwangu ye-meltbablown engalukiwe yingxenye ebalulekile yemaski enganikeza iningi lokuvikelwa. Indwangu engekho elukiwe yemaski inomsebenzi we-electrostatic adsorption, ongagcina amagciwane aphume. I-Rayson ingumenzi wendwangu ocibilikile, enikeza indwangu e-meltbablown engu-25GR elukiwe 25GR yemaski.
Indwangu e-meltbablown engalukiwe
Indwangu e-Melt Blown Enloven Engelukiwe yenziwa ngenqubo ekhethekile yokukhiqiza indwangu enolukiwe enemicu emihle kakhulu.Singahlinzeka ngokushaywa okujwayelekile okusetshenziselwa imikhiqizo ehlukile, ikakhulukazi i-20G / GSM-150g / GSM. I-BFE 99% Blown-Blown isetshenziswa kabanzi ukukhiqiza imaski yobuso yezokwelapha, imaski yobuso bezokwelapha, futhi ithengise kahle futhi ithandwa endimeni ehlukene yezimboni. I-Microfibers ihlinzeka indawo ephezulu yokufakelwa okuhle kanye nokuhlungwa kwezimpawu.Faka imaski eyenziwe ngendwangu ye-BFE99 Blown engekho emthethweni ingavimba ngempumelelo ukusakazeka kwamagciwane. Kuvimbela ukutheleleka - phakathi kwabantu kanye nokusakazeka kwamagciwane ahlukahlukene ngezinkathi ezihlukile. Kungavimbela futhi ngempumelelo impova allergy futhi kunciphise ukulimala kwezinto eziyingozi emzimbeni womuntu. Ithandwa odokotela, abahlengikazi, kanye nabanye abasebenzi bezokwelapha.
I-electrostatic adsorption meltballown noven fabric 25gr yamaskandi
Indwangu e-Meltbablown Engelonakalisiwe yenziwa ngenqubo ekhethekile yokukhiqiza indwangu enolukiwe enemicu emihle kakhulu.Iyingxenye esemqoka yamamaski anganikeza iningi lokuvikelwa. Isici saso se-Electrostatic Adsorption sigcina amagciwane.